Taageerada Call 0086-755-83880080
The benefits of isticmaalaya SoonLink ARS.
-celin 1.Get iyo natiijada si fudud oo dhakhso leh
2.Engage aad dhagaystayaasha, ardayda
3.Liven ilaa aad bandhig
5.Increase ixtimraam ee dhageystayaasha
Maxay yihiin faa'iidooyinka SoonLink ARS?
Wireless inta jeer 1.2.4GHz, wifi ma loo baahan yahay;
Isgaarsiinta fog 2.Long, ilaa 100 mitir.
3.NFC for kuugu.
Seenyo 4.Classic loogu talagalay iyo interface hawlgal kooban, mid aad u fudud in ay isticmaalaan.
5.Instant, natiijooyinka sax ah iyo in sidoo kale la duubay sida Excel loo isticmaalo ka dib.
6.No xaddidaadda awoodda user.
Waayo-aragnimo 7.Wonderful isticmaalka mar walba meel kasta.
Qiimaha 8.Low runtii.
Waa maxay nidaamka jawaab-waqtiga dhabta ah dhagaystayaasha wireless (ARS)?
A nidaamka jawaab dhagaystayaasha-waqtiga dhabta ah waa nidaam xog ururinta ka hannaanka ah dadkii ka soo jawaabay isagoo qayb ka mid dhexe oo la processor dhexe iyo saldhiga ah iyo qayb ka fog leh hannaanka ka mid ah unugyada jawaab wireless waayo, jawaab bixiyayaasha in la keentay inay soo galaan xogta jawaab si ay u soo bandhigay muuqaal la geran karo oo waxaa laga yaabaa live muujiyay, on monitor telefishanka ama la duubay laga yaabaa. soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah su'aalaha kala doorashada badan. processor dhexe ururayaa xogta jawaabta via radio, links isgaarsiinta indhaha ama loomana baahno la unugyada fog, kuwaasoo mid walba uu leeyahay cinwaan u gaar ah. processor dhexe bandhigayaa xogta jawaab ururtay in waqtiga dhabta ah oo ku dahaadhaa laga yaabaa in xogta jawaab baaraandegi iyo billowda bandhigay muujiyay in jawaabay.
Maxaa ARS SoonLink ah loo isticmaali karaa?
SoonLink ARS waa kaamil for kala duwan ee loo isticmaalo oo ay ku jiraan wax ku barayay dhexgalka, kulan votes iyo shirarka sahanka. Waxay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in ay oggolaadaan in ka qaybgale in la siiyo jawaab-celin inta lagu guda jiro tababarka shaqaalaha, aqoon isweydaarsiyo iyo qiimeynta khatarta. waqti kasta oo aad u baahan tahay si ay u codeeyaan on arrin ama ka tiro badan oo ah dadka soo ururiyo macluumaadka, SoonLink ARS waa habka ugu fiican ee loo sameeyo.
Maxaad ARS SoonLink waxay ka kooban yihiin?
SoonLink ARS wuxuu ka kooban yahay hardware iyo software. hardware wuxuu ka kooban yahay dhowr ah oo qaar ka mid ah keypads wireless (ilaa 2000) iyo aqbalana a wireless iyo cable USB ah. Software lagu rakibi karo in aad computer iyadoo aan loo eegayn nidaamka socda waa Microsoft Windows ama Mac OS.
Sidee keypads ha shaqeeyo?
SoonLink rada codbixinta wireless waa agagaarka size of credit card. keypads waxaa la siiyaa qof kasta oo fasal, shir ama kulan. pads wuxuu ula xiriiri la qadanayo wireless kibis-size ah oo isku xira kombiyuutarka via cable USB ah, qabsaday jawaabaha su'aalaha la complete sax. Tani waxay noqon kartaa hab aad u qiimo leh ay u soo ururin-celin sida ay u oggolaanaysa in jawaabaha oo gebi ahaanba si qarsoodi ah in aan la hogaaminayo badnaa. Natiijada waxaa sidoo kale soo uruurusay iyo ku dhawaad ​​isla soo bandhigay. Tani waa ka dhakhso badan hab kasta buuggan ee doorashada ama warcelin kulan.
Cinwaankaaga: Room 1407, Kingem Intelligence Building, Liuxian Street, Degmada Nanshan, Shenzhen, Shiinaha